Pfungwa nyowani ye iPhone 7 ine iOS 10 | IPhone nhau
Zvekare tinokuratidza vhidhiyo nyowani mairi mugadziri DBS Iye anotipa iye yake maonero ekuti iye angade sei inotevera iPhone 7 kuve. Sezvatinogona kuona muvhidhiyo, ava vakomana vanotarisira nhau dzakawandisa kune chishandiso chinowanzo gashira mashoma ekuvandudza gore rega, zvese zviri kunze nekunze.
Zviri pachena kuti vakomana veDBS vakatambura nehanalucinogenic mhedzisiro yechimwe chinhu vasati vanyatsotsanangura hunhu hwavangade kuti inotevera iPhone ive navo uye, nekuti mazhinji acho, sekurangarira kana kugadzirisa kamera, pamwe nekugona kwebhatiri nhasi chinhu icho Apple isingatomboitise mumidziyo yako.
Zvimiro zveiyo nyowani iPhone 7 pfungwa:
Ingangowanikwa chete mune sirivheri, goridhe uye rose goridhe. Space grey yaizonyangarika kubva paruvara runyorwa pane iyo iPhone 7.
Notifications dzaizoonekwa padivi pechigadzirwa kuitira kuti tirege kufambidzana neyemberi skrini yechinhu, asi isu tinogona zvakare kudzora vhoriyamu yeiyo iPhone, tichiisa mabhatani padivi pechidzitiro kwataigona kuverenga zviziviso.
Iwo masikirini einotevera iPhone 7 angave mashanu uye 5 inches ne 5,5k resolution, isina miganhu kumberi uye skrini pamativi ezaziso. Iyo skrini yaizodzivirirwa nesafiri girazi jira.
Ndangariro yechigadzirwa chingave 6 GB.
Iko kugona kwekuchengetera kungave 64GB, 128GB, 256GB, uye 512GB. Inenge iri nguva yekutanga iyo Apple inokanganwa chaizvo nezveiyo yekutanga 16GB modhi.
Iyo yekumashure kamera ingangove mbiri 24 mpx ine aperture ye f / 1,7.
Iyo yekumberi kamera yaigona kukwira kusvika 16 mpx.
Kana zviri zvebhatiri, izvi zvingave 5000 mAH.
Kudzora kwekamera kutora mifananidzo kana kutora mavhidhiyo kunogona kuve kwakazara uye kurekodha mu4k mhando kunenge kuri pa120 fps.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Pfungwa nyowani ye iPhone 7 ine iOS 10
6gb yegondohwe?!?!?!! Zvinoonekwa kuti iye akagadzira vhidhiyo iyi fan of android crap…. Nenzira iyo dhizaini iri ANOSHAMISA !!!
Une iPod yekare here? Unogona kuitengesa ne € 18.000